Daahida Xiriirka silsiladda Shiinaha ayaa ka fogaysa cayayaanka duulaya laakiin Hawo Fudud iyo Iftiin warshadda iyo alaab-qeybiyeyaasha | Boegger
Daahyada Iskuxirka silsiladda - Xulasho Fiican Naqshadaynta Gudaha
Daaha silsiladda isku xidhka silsiladda, oo sidoo kale loogu magacdaray shaashadda duullimaadka silsiladda, ayaa laga sameeyay silig aluminium ah oo leh daaweyn dusha anodized ah. Sidaan wada ognahay, maaddada aluminiumku waa mid khafiif ah, dib loo cusbooneysiin karo, cimri dherer badan leh waxayna leedahay qaabdhismeed jilicsan. Tani waxay hubineysaa daahyada isku xirnaanta silsiladda inay leedahay iska caabin miridh wanaagsan iyo sifooyin wanaagsan oo looga hortago dabka. Daahyada iskuxirka silsiladda qurxinta waxay bixisaa difaac gaar ah marka lagu daro saameynta qurxinta wanaagsan. Isla mar ahaantaana, shaashadda duulista silsiladda waxay ka fogaan kartaa cayayaanka waxayna haysaa hawo nadiif ah taas oo ku siinaysa jawi nadiif ah. Intaa waxaa sii dheer, waxaa lagu heli karaa midabyo kala duwan, waxaad dooran kartaa midab kasta oo waafaqsan qaab dhismeedkaaga. Faa'iidooyinkaas awgood, daah silsilad isku dhejisan oo laba jibbaaran ayaa ku habboon guryaha, hudheelada, maqaayadaha, xarunta wax laga iibsado iyo meelaha kale.
CLC-01 Daahida Iskuxirka Silsiladda Caadiga ah
CLC-02 Daaha Iskuxirka Silsiladda Half-silsiladda
Magaca badeecada: silsiladda isku xidhka silsiladda.
Waxyaabaha: silig aluminium ah.
Daaweynta oogada: anodized.
Midabbada: lacag, madow, cagaar, buluug, guduud, guduud, dahab, naxaas iyo midabbo kale waa la warsan karaa.
Dhexroor silig: 0.8 mm, 1.0 mm, 1.2 mm, 1.3 mm, 1.6 mm, 1.8 mm, 2.0 mm ama codsiyadaada.
Ballaca Hook: 9 mm ama 12 mm.
Dhererka jillaab: 17 mm, 20.4 mm, 22.5 mm, 24 mm, iwm
Xajmiga daahyada: 0.8 m × 2 m, 0.9 m × 1.8 m, 0.9 m × 2 m, 1 m × 2 m, 1 m × 2.1 m iyo wixii la mid ah.
Fiiro gaar ah: Qeexitaanno gaar ah ayaa sidoo kale la heli karaa iyadoo loo eegayo shuruudahaaga.
CLC-03 Iskuxirka silsiladda Cabirka Qeexitaanka Daahfurka
Waxyaabaha deegaanka u habboon.
Qaab fudud iyo qaab dhismeed jilicsan.
Si fudud loo rakibo loona dhaqaaqo.
Iska caabin miridhku, dabka iyo adkeysiga.
Muuqaal wanaagsan oo daadinta ah si loo laalaado
Naqshad gaar ah - qaabdhismeedyo laba jibbaar ah.
Ka fogow cayayaanka oo hawo hawo leh ku hayso.
Waxaa lagu heli karaa midabbo kala duwan oo loogu talagalay qaabab kala duwan.
Daaweynta dusha leh ee Anodized waxay abuurtaa muuqaal qurux badan iyo saameyn qurxin qurux badan.
Daahyada silsiladda duullimaadka silsiladda waxaa loo isticmaali karaa:
Daaha albaabka Darbiga daahyada masraxa.
Darbiga darbiga. Qaybinta gudaha.
Daaqada daaqadda Qaybta qolka
Hooska ilayska Naqshadeynta naqshadaha ka baxsan.
Marka daahyada isku xidhka silsiladda ayaa si ballaadhan loogu adeegsadaa:
Jaranjarada jaranjarada Goobaha nasashada
Goobaha laga dukaameysto. Musqulaha.
Xafiiska. Noocyada masraxa.
Daahyada isku xidhka silsiladda 'CLC-04' saamayn kuma yeelanayso qorraxdu soo gasho.
Daahida isku xidhka silsiladda silsiladda 'CLC-05' oo ku dheggan saqafka ayaa nalka ka caawiya iftiinka si qurux badan.
CLC-06 iskudhafyada kala duwan ee daahyada silsiladda isku xidhka ayaa sameeya naqshad gudaha wanaagsan.
CLC-07 Codsiga maqaaladda iskuxirka silsiladda isku xidhka silsiladda 'Chain link'.
CLC-08 Codsiga xarunta dukaanka daahyada silsiladda silsiladda 'Chain link'.
CLC-09 daah isku xidhka silsiladda oo leh midabbo kala duwan ayaa samayn kara ereyo ama sawirro.
Daahyada silsiladda isku xidhka ku rid bac balaastik ah, ka dibna baco balaastig ah oo baakado ku jira ku rid kartoonno sida ay u kala horeeyaan.
Shaashad duuban shaashad duullimaad leh warqad aan biyo caddeyn karin ama filim caag ah, iyo xirmooyinka xirmooyinka xirmooyinka xirmooyinka xirmooyinka ee kartoonnada ama kiisaska alwaaxda ah sida codsiyadaada
CLC-11 silsiladda isku xirnaanta silsiladda oo lagu rido sanduuqyada kartoonka.
CLC-10 silsiladda isku xidhka silsiladda oo lagu duubay filim caag ah.
Ku rakibida daahyada silsiladda isku xidhka, waxaa jira saddex qaab oo kala duwan oo loo rakibo shaashadda duullimaadka silsiladda. Mid ayaa sudhan rakibaadda tareenka, qaar kalena waa rakibaadda jidka. Qalabka rakibidda waxaa ku jira U track rakibidda iyo H raadinta rakibidda. Dhammaantood waxay raad raacayaan miisaanka culus ee daahyada birta culus. Saddexdaan hab waa kuu fudud rakibitaan adiga. Kaliya ubaahan xoogaa boolal ah darbiyada ama saqafyada, oo daaha korka sudhan.
Sawiridda daah silsilad isku xidha saqafka.
Sawiridda daah silsiladda isku xidhka ee darbiga ku dheggan.
Daahyada silsiladda isku xidha ee tareenka sudhan
Daahyada isku xidhka silsiladaha ee sudhan wadada H
Hore: Wareega Suunka Mesh Mesh Ku habboon Dhismaha Fududeynta iyo Gogosha.
Xiga: Daaha Birta Bead - Qaybiye Aad U Fiican
Birta la Kordhiyay ee Dhismaha Lagu Caawiyo Re ...
Architectural-xidhkii mesh Mesh loo adeegsaday Dhismaha Faca ...
Ahama Steel Xadhig mesh Green Wall for Climbi ...